Ipulaki Cheesy emphinjeni
Imigudu Caseous noma amahlule emphinjeni ezingemnandi ikakhulukazi kwakhiwa ngenxa ukuthuthukiswa namathansela ezingamahlalakhona. Ngokusho ososayensi ucwaningo, amalaka LasePalatine kukhona amasosha omzimba. Ngakho-ke, uma amasosha omzimba buthaka umthelela izici zangaphandle Kwenziwa impindiselo. Izizathu eziyinhloko tekwakha plug nokunjengoshizi ukubhema, ukuphuza utshwala, khona ukutheleleka emzimbeni, yona eyaqala ukwenza i ukuthuthukisa ngentshiseko ngenxa ukuncipha okukhulu ezivikela mzimba. Umthombo zingaba nokuvaleka kwemigudu yokuphefumula kubangelwa, isib, eguqa ikhala. Cishe bonke abantu ikakhulukazi ehlaselwe kwezimo ezingezinhle kwemvelo.
Uphawu oyinhloko okuvela ka namathansela ezingamahlalakhona kukhona amalaka nokunjengoshizi ukuminyana, okuyinto kwakuhilelani umuzwa esibi kabi emphinjeni. Isiguli uyakhathala kalula, awukwazi eside wahlanganyela eyodwa futhi into efanayo, kukhona ukudideka ukwazi futhi buthakathaka ngokomzimba.
ipulaki Cheesy emphinjeni ezibhekwa umthombo we halitosis, ngenxa okuyinto umuntu ayikwazi ukuba inkampani futhi njalo elibhekene nezinye kabi. Ukwakheka lezi amashubhu ngenxa ekuqongeleleni ubomvu e yenqwaba ngenxa ukuncipha eziphawulekayo ikhono kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni ukuze alwe namagciwane. Ngu uqobo, ubovu mass kuwumphumela izivikeli mzimba, okungukuthi, kuyinto cell, efile ngenxa okulwa namagciwane. Ngokuhamba kwesikhathi, amalaka baba avimbekile nge ubomvu kanye ahluleke ukufeza umsebenzi wabo ngqo. Futhi, uma ungenawo afeze ukwelashwa okunengqondo, umsebenzi microbial medium futhi amagciwane kungaholela emiphumeleni engathí sina kakhulu.
Ngokushesha ukunqotshwa ipulaki nokunjengoshizi cishe kungenakwenzeka, ngoba ukwelashwa kufanele kube kancane kancane futhi zidinga isineke phezu ingxenye nesineke. Okokuqala, ukuhlanza amalaka futhi kwakhiwe kabusha imisebenzi yabo, okungukuthi, injongo oqondile. Ukususa ubovu mass kungaba kwenziwe ekhaya noma isikhungo sokwelapha ngosizo kodokotela. Yiqiniso, kule nqubo emtholampilo kuyoba esiphumelela nakakhulu lapho ukuhlanzwa kwenziwe idivayisi ekhethekile, ngakho-ke, umphumela omuhle kuzofika maduze. Le yunithi kususa Imigudu nokunjengoshizi usebenzisa uLwandle Lukasawoti kanye nesethi amakhambi ewusizo. Ngemva izikhathi isiguli nakho impumuzo ukungakhululeki zinyamalale ke amalaka ukubuyisela ngokuphelele ikhono iwukudambisa amagciwane ayingozi.
Njengoba inkampani, kodwa hhayi eliphansi in ukubaluleka, isigaba yokwelashwa abameli ekukhombeni imbangela ukusebenza ukutheleleka. Enye kungaba buthaka isifo mzimba njengoba isici esiyinhloko. Lokho kusho ukuthi kufanele kabusha isimiso somzimba sokuzivikela. Ezindabeni ezinjalo kusiza udokotela-immunologist. Isixazululo kungcono ukuba kudlule luhlolo umnyuziki wezokwelapha. Kodwa uma lokhu kungeke kwenzeke, kufanele sizame ukuba kudlule okungenani isethi esezingeni ukuhlolwa, ezifana umchamo, igazi, esifubeni X-ray.
Futhi wazonda Imigudu nokunjengoshizi wahlula, futhi asikwazi ukhathazeke nephunga esibi ovela emlonyeni. Ukuze ugweme ukuphindaphindwa esimweni esingajabulisi ezinjalo, akufanele sidebeselele izinyathelo. Ngokwesibonelo, kungenzeka kabili ngonyaka ukuze sifeze inqubo amalaka wokuwasha, ngenxa lapho ukumelana izifo eziningi kuba liphinyiselwe the nobusika. Ngakho, ukubhekana nenkinga efana plug nokunjengoshizi emphinjeni kungenzeka. Futhi ngenhlonipho ngenxa impilo yabo ongaqeda izinkinga impilo yakho yonke, nje ngokwanele ngeke akukhohlwe ukuthatha izinyathelo zokuvimbela eziyisisekelo.
Isikhunta ebusweni: amafomu, kubangela kanye nokwelashwa
Inhliziyo isigqi ukuphazamiseka
Ukuvuvukala emsipheni ebusweni.
Hazelnuts zokwelapha - kumnandi ukudla ehlathini
Uyini umehluko phakathi kwe-xenon ne-bixenone? Yini engcono - i-bixenone noma i-xenon?
Vaz-2110: Voltage Regulator: ezisebenza izimiso, amadivaysi, izifunda, kanye esikhundleni
Kungani isibhakabhaka siluhlaza? Kanjani ukuphendula umbuzo sengane omdala